Buick ကားအန်းဒရွိုက်ကား DVD, Buick ကား 4.4 Android ကိုကား DVD, Buick ကား 5.1 Android ကိုကား DVD ၏တရုတ်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
ဖေါ်ပြချက်:Buick ကားအန်းဒရွိုက်ကား DVD,4.4 Android ကိုကား DVD Buick,5.1 Android ကိုကား DVD Buick,Buick ကားအန်းဒရွိုက်ကား DVD 6.0.1,Buick ကားကိုနှစ်ချက်ဒင်က Android ကား DVD,
Home > ထုတ်ကုန်များ > Buick ကားအန်းဒရွိုက်ကား DVD
Buick ကားအန်းဒရွိုက်ကား DVD ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, Buick ကားအန်းဒရွိုက်ကား DVD, 4.4 Android ကိုကား DVD Buick ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, 5.1 Android ကိုကား DVD Buick R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
Klyde Excelle GT ကို XT ကို Android 9.0 Autoradio  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Excelle GT ကို XT 2011-2012 များအတွက် Android ကို Autoradio  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အန်းဒရွိုက် 8.1 OS ကိုမာလ်တီမီဒီယာ Player ကို Astra J ကို 2012 ခုနှစ်,  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
4G RAM ကိုအန်းဒရွိုက် 8.0 ကား DVD ကို Astra J ကို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Buick ကား Regal 2009-2013 ဘို့မော်တော်ကားအသံကစားသမား  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
7.1 Buick ကား Regal 2014-2016 သည်စနစ်ကားကို DVD Player ကို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Buick ကား Encore 2012-2015 ကားကို DVD Player ကို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Buick ကား Excelle GT ကို / XT သည်မော်တော်ကားပေး Audio Player ကို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Buick ကား Excelle များအတွက် Android မှာ 5.1 စနစ်ကကားကိုဒီဗီဒီ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Buick ကား Excelle GT ကို / XT 2011-2012 ဘို့ကားတစ်စီး DVD  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မူလစာမျက်နှာပြဇာတ်ရုံ Buick ကားကား DVD အောင်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Regal 2014-2016 ဟာ android DVD စာရေးဆရာကစားသမား  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အန်းဒရွိုက် 8.1 Astra J ကို 2011-2012 မော်တော်ကား DVD  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Opel Astra K သည်များအတွက် GPS နှင့်အတူအန်းဒရွိုက် 8 စတီရီယို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Opel Astra K သည်များအတွက် Android ကို 8 ကားတစ်စီးအသံဖိုင်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Opel Astra K သည် android ကားတစ်စီးစတီရီယိုစနစ်များ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဂျီပီအက်စ်နှင့်အတူ Opel Astra K သည်ကားကို DVD ကစားသမား  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Opel Astra ဟာ android 8 ကားတစ်စီး DVD ကစားသမား  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Insigina 2009-2012 ဘို့ကားတစ်စီးမာလ်တီမီဒီယာနှင့် navigation system ကို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Regal များအတွက် Android မှာ 8.0 ကားတစ်စီးအသံစနစ်များကို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
2016 Regal ဟာ android 8 မာလ်တီမီဒီယာပလေယာ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Klyde Excelle GT ကို XT ကို Android 9.0 Autoradio
Klyde Excelle GT ကို XT ကို Android 9.0 Autoradio နောက်ခံအလင်းအရောင်မတရားဖမ်းဆီးထားနိုင်ပြီး, အသုံးပြုသူရဲ့ preference ကိုအညီပြသနိုင်ပါသည်။ ဤသည်ယူနစ် DAB + ရေဒီယို receiver နှင့်အတူ Excelle GT ကို XT အန်းဒရွိုက် Autoradio, သင်သာလွန်...
Excelle GT ကို XT 2011-2012 များအတွက် Android ကို Autoradio
Excelle GT ကို XT 2011-2012 များအတွက် Android ကို Autoradio သင်သွားလေရာရာ၌ Wi-Fi ကို built-in Excelle များအတွက် Android ကို Autoradio, ပိုမိုမြန်ဆန် LTE ကို download speed ကများနှင့်အင်တာနက်ကိုပိုမိုသုံးစွဲနိုင်ဘို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ Built-in RDS...
အန်းဒရွိုက် 8.1 OS ကိုမာလ်တီမီဒီယာ Player ကို Astra J ကို 2012 ခုနှစ်,
အန်းဒရွိုက် 8.1 OS ကိုမာလ်တီမီဒီယာ Player ကို Astra J ကို 2012 ခုနှစ်, 1, 3D Navigation: အဆိုပါကားတစ်စီးစတီရီယိုမြင့်မားသောတိကျမှန်ကန်မှု၏ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကို real-time အညွှန်း function ကိုတပ်ဆင်ထားသည်။ အန်းဒရွိုက် 8.1 OS ကိုမာလ်တီမီဒီယာ Player ကို...
4G RAM ကိုအန်းဒရွိုက် 8.0 ကား DVD ကို Astra J ကို
ထုပ်ပိုး: 3.5KGS / 318 * 243 * 313MM / ဆုကြေးဇူးကို box ကို Set
4G RAM ကိုအန်းဒရွိုက် 8.0 ကား DVD ကို Astra J ကို 1. 4G RAM ကိုအန်းဒရွိုက် 8.0 ကား DVD ကို Astra J ကိုဟာ android အပါအဝင်ခြင်းနှင့်ကားကို DVD Player ကို wince, ဒီဇိုင်း, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စျေးကွက်ကားကို DVD ပလေယာအတွက် 7...
Buick ကား Regal 2009-2013 ဘို့မော်တော်ကားအသံကစားသမား
Buick ကား Regal 2009-2013 ဘို့မော်တော်ကားအသံကစားသမား android ဖုန်းနှင့်ကားကို DVD Player ကို wince အပါအဝင် Buick ကား Regal 2009-2013 များအတွက် 1. ကားအသံကစားသမား, ဒီဇိုင်း, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စျေးကွက်ကားကို DVD ပလေယာအတွက် 7...
7.1 Buick ကား Regal 2014-2016 သည်စနစ်ကားကို DVD Player ကို
7.1 Buick ကား Regal 2014-2016 သည်စနစ်ကားကို DVD Player ကို android ဖုန်းနှင့်ကားကို DVD Player ကို wince အပါအဝင် Buick ကား Regal 2014-2016 သည် 1.7.1 System ကိုကားကို DVD Player ကို, ဒီဇိုင်း, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စျေးကွက်ကားကို DVD ပလေယာအတွက် 7...
Buick ကား Encore 2012-2015 ကားကို DVD Player ကို
Buick ကား Encore 2012-2015 ကားကို DVD Player ကို 1.Buick Encore 2012-2015 ကားကို DVD Player ကိုဟာ android အပါအဝင်ခြင်းနှင့်ကားကို DVD Player ကို wince, ဒီဇိုင်း, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စျေးကွက်ကားကို DVD ပလေယာအတွက် 7...
Buick ကား Excelle GT ကို / XT သည်မော်တော်ကားပေး Audio Player ကို
Buick ကား Excelle GT ကို / XT သည်မော်တော်ကားပေး Audio Player ကို Buick ကား Excelle GT ကို / XT သည် 1.Car ပေး Audio Player ကိုဟာ android အပါအဝင်ခြင်းနှင့်ကားကို DVD Player ကို wince, ဒီဇိုင်း, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စျေးကွက်ကားကို DVD ပလေယာအတွက် 7...
Buick ကား Excelle များအတွက် Android မှာ 5.1 စနစ်ကကားကိုဒီဗီဒီ
Buick ကား Excelle များအတွက် Android မှာ 5.1 စနစ်ကကားကိုဒီဗီဒီ အဆိုပါရေဒီယို sensitivity ကို setting ကို၏ Buick ကား Excelle များအတွက် 1. ကို Android 5.1 စနစ်ကကားကို DVD ကိုမြင့်မားသည်, အသံလက်ခံရရှိမည်, စားပွဲပေါ်မှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး,...
Buick ကား Excelle GT ကို / XT 2011-2012 ဘို့ကားတစ်စီး DVD
Buick ကား Excelle GT ကို / XT 2011-2012 ဘို့ကားတစ်စီး DVD 7dynamic backgrouds ရရှိနိုင်: ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်ပြောင်းလဲနေသောနောက်ခံ - Buick ကား Excelle GT ကို / XT 2011-2012 များအတွက် 1. မော်တော်ကား DVD ။...
မူလစာမျက်နှာပြဇာတ်ရုံ Buick ကားကား DVD အောင်
မူလစာမျက်နှာပြဇာတ်ရုံ Buick ကားကား DVD အောင် 1. Buick ကားများအတွက်ဒီမော်ဒယ်ယခုအလွန်တည်ငြိမ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ OEM ဝန်ဆောင်မှုလက်ခံပါ။ သင်ကလိုဂို, ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် UI ကိုအဘို့သင့်ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းကိုသုံးနိုင်သည်။ ဒီ Buick...
Regal 2014-2016 ဟာ android DVD စာရေးဆရာကစားသမား
Regal 2014-2016 ဟာ android DVD စာရေးဆရာကစားသမား 1. Buick ကား Regal ဒီမော်ဒယ်ယခုအလွန်တည်ငြိမ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ OEM ဝန်ဆောင်မှုလက်ခံပါ။ သင်ကလိုဂို, ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် UI ကိုအဘို့သင့်ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းကိုသုံးနိုင်သည်။ ဒီ Buick ကား Regal...
အန်းဒရွိုက် 8.1 Astra J ကို 2011-2012 မော်တော်ကား DVD
အန်းဒရွိုက် 8.1 Astra J ကို 2011-2012 မော်တော်ကား DVD 1, DAB: ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံထုတ်လွှင့်မှုအတွက်က Short, အသံလွှင့်ရေဒီယို station တစ်ခုအဆင့်မြင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ရေဒီယိုနည်းပညာအဖြစ် DAB ်ရောက်စွက်ဖက်ပြဿနာတွေနဲ့ signal ကိုဆူညံသံလျော့ချပေးဖို့ features...
Opel Astra K သည်များအတွက် GPS နှင့်အတူအန်းဒရွိုက် 8 စတီရီယို
Opel Astra K သည်များအတွက် GPS နှင့်အတူအန်းဒရွိုက် 8 စတီရီယို Opel Astra K သည်ဟာ့ဒ်ဝဲန့်သတ်ချက်များအဘို့အ GPS နှင့်အတူအန်းဒရွိုက် 8 စတီရီယို OS ကို: အန်းဒရွိုက် 8.0 စနစ်က CPU ကို: ရော့ခ် chip ကို PX5 Cortex A53 ရမ်: Samsung DDR3 ကို 4GB Flash ကို:...
Opel Astra K သည်များအတွက် Android ကို 8 ကားတစ်စီးအသံဖိုင်
Opel Astra K သည်များအတွက် Android ကို 8 ကားတစ်စီးအသံဖိုင် Opel Astra K သည်ဟာ့ဒ်ဝဲန့်သတ်ချက်များများအတွက် Android ကို 8 ကားတစ်စီးအသံဖိုင် OS ကို: အန်းဒရွိုက် 8.0 စနစ်က CPU ကို: ရော့ခ် chip ကို PX5 Cortex A53 ရမ်: Samsung DDR3 ကို 4GB Flash ကို: 32GB...
Opel Astra K သည် android ကားတစ်စီးစတီရီယိုစနစ်များ
Opel Astra K သည် android ကားတစ်စီးစတီရီယိုစနစ်များ Opel Astra K သည် android ကားတစ်စီးစတီရီယိုစနစ်များဟာ့ဒ်ဝဲန့်သတ်ချက်များ OS ကို: အန်းဒရွိုက် 8.0 စနစ်က CPU ကို: ရော့ခ် chip ကို PX5 Cortex A53 ရမ်: Samsung DDR3 ကို 4GB Flash ကို: 32GB ရေဒီယို: FM ရေ...
ဂျီပီအက်စ်နှင့်အတူ Opel Astra K သည်ကားကို DVD ကစားသမား
ဂျီပီအက်စ်နှင့်အတူ Opel Astra K သည်ကားကို DVD ကစားသမား ဂျီပီအက်စ်ဟာ့ဒ်ဝဲန့်သတ်ချက်များနှင့်အတူ Opel Astra K သည်ကားကို DVD ကစားသမား OS ကို: အန်းဒရွိုက် 8.0 စနစ်က CPU ကို: ရော့ခ် chip ကို PX5 Cortex A53 ရမ်: Samsung DDR3 ကို 4GB Flash ကို: 32GB...
Opel Astra ဟာ android 8 ကားတစ်စီး DVD ကစားသမား
Opel Astra ဟာ android 8 ကားတစ်စီး DVD ကစားသမား Opel Astra ဟာ android 8 ကားတစ်စီး DVD ကစားသမားဟာ့ဒ်ဝဲန့်သတ်ချက်များ OS ကို: အန်းဒရွိုက် 8.0 စနစ်က CPU ကို: ရော့ခ် chip ကို PX5 Cortex A53 ရမ်: Samsung DDR3 ကို 4GB Flash ကို: 32GB ရေဒီယို: FM ရေ / AM...
Insigina 2009-2012 ဘို့ကားတစ်စီးမာလ်တီမီဒီယာနှင့် navigation system ကို
Insigina 2009-2012 များအတွက် Android မှာ 8.0 ကားတစ်စီးမာလ်တီမီဒီယာနှင့် navigation system ကို Insigina 2012 အဘို့သင့်ကားတစ်စီးမာလ်တီမီဒီယာ system အတွက်ပြီးပြည့်စုံသောမထိုက်မတန် High Definition သင့်ရဲ့...
Regal များအတွက် Android မှာ 8.0 ကားတစ်စီးအသံစနစ်များကို
Regal များအတွက် Android မှာ 8.0 ကားတစ်စီးအသံစနစ်များကို 1.Steering ဘီးကိုထိန်းချုပ်သည့်အပြောင်းအရွေ့အပေါ်လုံခြုံစွာသင့်ရဲ့ဂီတ၏ထိန်းချုပ်မှုကိုယူ, အဆင်သင့် plug ။ ဒီ functions များနှင့်အတူ, သငျသညျကိုစေ့စေ့ Regal များအတွက်ပိုမိုလုံခြုံ, အန်းဒရွိုက်...
2016 Regal ဟာ android 8 မာလ်တီမီဒီယာပလေယာ
2016 Regal ဟာ android 8 မာလ်တီမီဒီယာပလေယာ 1.Steering ဘီးကိုထိန်းချုပ်သည့်အပြောင်းအရွေ့အပေါ်လုံခြုံစွာသင့်ရဲ့ဂီတ၏ထိန်းချုပ်မှုကိုယူ, အဆင်သင့် plug ။ ဒီ functions များနှင့်အတူ, သငျသညျကိုစေ့စေ့ပိုလုံခြုံ, 2016 Regal ဟာ android 8...
တရုတ်နိုင်ငံ Buick ကားအန်းဒရွိုက်ကား DVD ပေးသွင်း
Buick ကားအန်းဒရွိုက်ကား DVD (ထိတွေ့မျက်နှာပြင်ကားတစ်စီး DVD player)
1.Buick အန်းဒရွိုက်ကား DVD: Porsche, ထိုဂီတ၏အနက်ကိုအဘို့ကားကိုဂျီပီအက်စ်ကစားသမားများ၏အဆင့်မြှင့်ပြီးနောက်, နှင့်လေထုတိကျသောနူးညံ့သိမ်မွေ့သောချိန်ခွင်လျှာခဲ့တွေ့ကြုံခံစားဖို့သင်ပြီးပြည့်စုံသောအစက်အပြောက်ရောက်စေဖို့, ကောင်းမွန်သောဂီတနှင့်ပျော့ပျောင်းသောအလှတရားကိုပြ။ စွမ်းအင်တစ်ခုသဘောမျိုးရှိသည်ဖို့သာယာသောအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့နှင့်ဂန္ကျက်သရေ၏ရေးစပ်ဂီတ, သိပ်သည်းဆ, သတင်းအချက်အလက်အသံပမာဏ, resolution နဲ့အနေအထားကိုအသိ၏ဒြပ်စင်ပါဝင်သည်။ ကျနော်တို့အဆင်ပြေဂီတကိုခံစားနိုင်အောင်, ဒါပေမယ့်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုဂီတအတှေးနဲ့စိတ်ခံစားမှု၏လေးနက်အမြင်အားဖြင့်သဘာဝဂီတသို့ခွင့်ပြုနှင့်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နှင့်ရစ်သမ် Buick ကား 4.4 Android ကိုကား DVD နှင့်အတူမြင့်တက်ထံမှဝမ်းမြောက်၏ဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်။
2.Buick 5.1 Android ကိုကား DVD: Bulit-in ကို WIFI ဟော့စပေါ့မျှဝေ: သင်တို့အဘို့လွယ်ကူပြီးချောမွေ့စွာအင်တာနက် access ကို browser ကိုအင်တာနက်, အွန်လိုင်းဗီဒီယိုများ watch, သင်၏မေးလ်စစ်ဆေးအခမဲ့အွန်လိုင်းမြေပုံနှင့်အတူဂိမ်းကို download apps များ, ဒါမှမဟုတ်ပင်အညွှန်း play .Cost အခမဲ့အွန်လိုင်းမြေပုံနှင့်အတူ -effective: သင်ထိုကဲ့သို့သောအခမဲ့များအတွက် Google မြေပုံ IGO, Sygic နှင့် Waze အားမြေပုံအဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောအွန်လိုင်းမြေပုံများအားအလွယ်တကူဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Google ကမြေပုံနှင့်အတူ, သင်အရှိဆုံးတိကျမှုနှင့်ကို up-to-date ဖြစ်အောင်လမ်းကြောင်းများ, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအသွားအလာဒေတာနှင့်ပိုပြီးရနိုင်။ သင့်ရဲ့လမ်းတစ်ဝှမ်းပိုမြန်လွယ်ကူမည်သည့်အခါမျှရှာပါ။
3.Buick 6.0.1 ကို Android မော်တော်ကား DVD: ပံ့ပိုးမှုလွယ်ကူသော-connected အင်္ဂါရပ်: android စမတ်ဖုန်းနှင့် devices များနှင့်အတူလိုက်ဖက်တဲ့, အလွယ်ကူသော-connected အင်္ဂါရပ်သင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းများနှင့်ကားကိုဦးခေါင်း uni အကြားနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ထိန်းချုပ်မှုနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျရိုးရှင်းစွာလိုအပ်သည့်အပိုမရှိဆော့ဗ်ဝဲနဲ့, ကို USB မှတဆင့် uni ရန်သင့်စမတ်ဖုန်းနှင့်ချိတ်ဆက်တွေကိုတပြိုင်တည်းအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Buick ကားအန်းဒရွိုက်ကား DVD 4.4 Android ကိုကား DVD Buick 5.1 Android ကိုကား DVD Buick Buick ကားအန်းဒရွိုက်ကား DVD 6.0.1 Buick ကားကိုနှစ်ချက်ဒင်က Android ကား DVD Ford ကားအန်းဒရွိုက်ကား DVD Mazda ကားအန်းဒရွိုက်ကား DVD